Sida loo iloobo qof aan ku jeclayn | Niman qurux badan
Sida loo iloobo qof aan ku jeclayn
Alicia tomero | 27/11/2021 21:00 | Lamaanaha iyo Galmada
Isku mid ma nihin midna Waxaan dareemaynaa si la mid ah, Haddaba marka la eego kala tagga ama habka aad isku daydo inaad qof illowdo waxay ku kici kartaa wax ka badan ama ka yar. Haddii waxa aad rabto ay tahay qof iska ilow in aanu ku jeclayn ma jirto qaacido sir ah si aad u awooddo, laakiin tabo taxane ah oo aad codsan karto iyadoo ku xidhan shakhsiyaddaada.
Goorma qof baa raad ku reebay noloshaada waana inaad jabisaa sabab kasta ha ahaatee, way adkaan doontaa in la iloobo iyo bilow qaab nololeed kale. Si taas loo sameeyo, waxaynu falanqeyneynaa kuwee noqon kara dawooyinka ugu wanaagsan iyo sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo jacaylka aan loo baahnayn.
1 Maxaan u ilaawi la'ahay qofkaas?
2 Ha ku hayn gudaha sidaad u xuntahay
3 Aqbal xaalada
4 Ka saar wax kasta oo qofkaas la xidhiidha
5 Jidkaaga ha lumin oo is hel
6 Xooji 'naftaada gudaha'
Maxaan u ilaawi la'ahay qofkaas?
Isku-xidhka iyo isku-xidhka ayaa ah sababaha ugu waaweyn taasi waxay kugu adkaynaysaa inaad qofkaas ilowdo. Jacaylku waa sabab kale waana tan ugu weyn dhammaan. Marka aan dareenno jacayl waxaan nahay dad faraxsan oo xitaa waxaan u sameyn karnaa waxyaabo aan la qiyaasi karin qofkaas.
Haddii aan waqti badan la qaadanay qofkaas, sidoo kale waxay noqon doontaa arrin kale oo soo kordhinaysa. Si sahal ah uma ilaawi karno haddi aan waligeed niyada ku hayno oo inta badan fikirkayagu ay u jihaysan yihiin. Haddaadan hadda ahayn waxaad dareemi doontaa cidlo oo xataa waxaan dareemi doonaa jahawareer.
Isku xirka iyo isagoo noolaa daqiiqado badan Caadi ahaan waxay adkeyneysaa in la iloobo. Waxyaabo badan ayaa la wadaagay, xitaa waxaa jiray xiriir gaar ah taas ayaana dareen farxadeed nagu abuurtay.
Ha ku hayn gudaha sidaad u xuntahay
Haddii tani ay noqotay dhibaato weyn ha badbaadin, waa shay nafsi ah oo aadan haysan karin. Waxaa laga yaabaa inay noqotay wax aad rabto inaad haysato sababtoo ah waxaad u maleyneysaa inay tahay wax laga xishoodo inaad sheegto ama aysan u qalmin inaad sheegto. Laakiin waa inaad taas rumaysataa garta oo iska daa aad bay kuu caawin doontaa.
In la yiraahdo hadda ka dib kuma jecli ma ahan xaqiiqo laga xishoodo. Waa inaad daacad ka noqotaa waxaad dareemaysay oo waxaad tidhaahdaa waxay u muuqataa daacad-darro inayan ku jeclayn. Caawinaad weydiiso dadka aad ku kalsoon tahay, saaxiibadaada dhabta ah ama qoyskaaga. Haddii aad rabto in aad u samayso hab ruuxi ah, fekerku aad buu u wanaagsan yahay oo waxaad dareemi kartaa wehel iyo nasasho.
Way adagtahay in qof la iloobo marka Xusuus ayaa madaxaaga ka soo burqaneysa iyo jawaabta shucuureed weli waa mid kalgacal leh oo ku wajahan xusuustaas. Way adag tahay in la qaado tillaabada sida qof loo cabudhinayo, laakiin haddii mar ay noqoto inaad samayso, waa inay noqotaa sida ugu dhakhsaha badan.
Xasuusnoow xilligaa gabagabada la gaaray in xiriirkani uusan sii socon karin, halkaasoo laga yaabo inuu kuu sheegay inuu dhammaaday. Waa inaad si faahfaahsan u malaysaa in tani ay dhammaatay, xitaa haddii ay ku jirdisho, laakiin waa inaad isku qancisaa.
Ka saar wax kasta oo qofkaas la xidhiidha
Waa dariiqa kaliya ee aysan fikirkaagu ku xajin qofkaas. Haddii lagugu xukumo in aanay dib u soo noqonayn, uma baahnid inaad sii jirdil naftaada iyo ogaanshaha tallaabo kasta oo nolosha ka mid ah. U hur wakhtigaaga quruxda badan ku daryeesho oo qiimo ku siiyee. Isku day inaadan isku dhicin isaga ama iyada, ama in shabakadaha bulshadu kuu sheegaan waxa uu sameeyo, haddii aad sidaas ka fogaato waxaad joojin doontaa dhibaatada. Waqtigaagu waa lacag hadda waa inaad u hurtaa ku dabool khibrado cusub.
Jidkaaga ha lumin oo is hel
Ha ku qaadin murugo iyo Gariirka ka dhig mid sarreeya. Tan waxa loo yaqaan 'aan lumin jidkaaga' taasna waa in aad aad diirada saarto naftaada. Raadso dhammaan siyaabaha iyo siyaabaha wax kasta oo aad awooddo abuur dhalanteed, fayoobaan iyo farxad. Ma aha in aad raadiso qof samayn kara, ama qof ku xidhan, laakiin aad raadsato qalab adiga kuu gaar ah oo aad dib u abuurto dhammaan daqiiqadahaas oo ku dareensiiya wanaag.
Waxaa jira dad u baahan in ay ka baxaan qaab nololeedkooda oo ay u baxaan safar weyn ama beddelaan magaalooyinka. Ujeedadu waa in aad hesho habka ugu wanaagsan ee aad mar kale isku heli karto, si aad u qiimeyso naftaada mar kale oo aad u gudbiso wax kasta oo dhacay xanuunka ugu yar.
Xooji 'naftaada gudaha'
Tani waxay ka dhigan tahay in 'naftaada ku kalsoonow'. Waa inaad ka shaqeysaa kalsoonidaada, qiimo ku siiya oo ku jecel. Waxaad u baahan doontaa inaad ooyso, laaddo, aad dareento cadho iyo rajo beel, laakiin maalin kasta maahan sidii hore. Oohin wixii aad awoodo si aad channelka ugu gudbiso waxaad arki doontaa sida ay maalmuhu u socdaan iyo iftiinku mar kale gudahaaga galo.
Waa inaad ku celcelisaa marar badan "Uma qalmo tan", "Ma aha inaan silco" waxaadna dareemi doontaa in wax yar in yar aad dareemi doonto fiicnaan. Waqti ka dib isku xirka cusub ee noloshaada kuma oggolaan doono inaad ka fikirto qofkaas oo xitaa haddii aad ka fikirto, dareenkaas ayaa meesha ka bixi doona. Waa inaad naftaada waqti siisaa, aad naftaada u jeclaataa oo aad ku xeeran tahay dadka aad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo iloobo qof aan ku jeclayn
Noocyada guntinnada guntimaha
10 fikradood oo hadiyad ah oo loogu talagalay haweenka Christmas 2021